Microsoft Win 10 Pro 64bit OEM Version na French
● French Version echichi na ebighị site internet, na-akwado ukara mmelite online.
● Real OEM mbipụta nkwa, dakọtara na 64bits usoro, zuru ọrụ gụnyere
● French nwere Security cover, Mere na USA, Mere na Ireland, Mere na Singapore, etc
Ụzọ oge: 24 Awa
1.Windows 10 na-enye gị ihe kasị mma ahụmahụ na-amalite ngwa ngwa ma na-ihe mere
2.Windows hello bụ paswọọdụ-free ịrịba ama-na na na-enye gị ihe ndị kasị, ọtụtụ ala ụzọ kpọghee ekwt gị Windows ngwaọrụ
3.Windows 10 anapụta mbara nchedo - tinyere antivirus, firewall, Internet nchedo, na ndị ọzọ
Bitlocker data izo ya ezo ma na-echebe enyemaka-gị na ozi dị mma
4.Hyper-v arụmọrụ-ahapụ gị ike mebere igwe, mgbe ime na desktọọpụ-enye gị ohere abanye na site na a dị iche iche na kọmputa
Key Words: windo 10 sistemụ; merie 10 pro full version
Windows 10 Pro Operating System: Remote log-na, a onye digital nnyemaaka, na ikike agba ọsọ otutu virtual desktop ga-enyere gị na-amụba arụpụtaghị. Bịaruo ma ọ bụ dee na ibe weebụ ma na-eso ha ka ahaziri ndetu. Mgbe ọ bụ oge iji zuru ike, ị nwere ike enuba Xbox One ọdịnaya gị Windows 10 PC, Laptọọpụ, ma ọ bụ mbadamba.
Were ndetu ọhụrụ Microsoft Edge nchọgharị weebụ
Bịaruo, mata, ma ọ bụ dee na na a web page via a touchscreen ma ọ bụ a òké, mgbe ahụ, ịkọrọ gị ndetu na ndị ọzọ.
Hazie Malite menu
Họrọ na-egosipụta gị kasị eji ma ọ bụ ndondo kwukwara ngwa, kpọmkwem nchekwa, ma ọ bụ usoro ntọala.
Agba ọsọ otutu sistem na otu PC
Mepụta virtual igwe na Hyper-V na-agba ọsọ karịa onye na sistemụ n'otu oge. (Hyper-V-achọ 64-bit usoro na SLAT ike na ndị ọzọ 2GB Ram.)
Abanye remotely na Remote Desktop
Abanye n'ime Windows 10 Pro, n'ụlọ ọrụ, ma ọ bụ mgbe na-eme njem. (Njikọ Ịntanetị chọrọ; ISP ụgwọ nwere ike ịdị.)
Inweta ohere ka ngwaọrụ gị site na iji gị mkpisiaka, ihu, ma ọ bụ iris
Họrọ Windows 10 ngwaọrụ na Windows Hello ga-amata ọnụnọ gị, akpọchi na-enweghị mkpa maka a paswọọdụ. (Chọrọ mkpisiaka na-agụ, ma ọ bụ Iye ma ọ bụ biometric mmetụta.)
Meziri imeghari dabara gị na ngwaọrụ
Onscreen nghazi agbanwe udi ka ohere maka mfe igodo, na ngwa ọnụ ọgụgụ dị iche iche-sized ngosipụta.
Nweta gị na netwọk
Windows 10 Pro ejikọ gị ahịa ma ọ bụ ụlọ akwụkwọ domain ịnweta netwọk faịlụ, sava, na-ebi akwụkwọ, na ndị ọzọ.
Play Xbox Otu egwuregwu na Windows 10
Enuba gị Xbox Otu egwuregwu a Windows 10 PC, Laptọọpụ, ma ọ bụ mbadamba. Egwu egwuregwu kachasị Windows 10, ma ọ bụ ndekọ na-eso egwu egwuregwu oge na-ewu na-Game DVR. (Broadband Internet chọrọ.)
Easily multitask na onye na ihuenyo
Snap ruo anọ ngwa ihuenyo, ma ọ bụ mepụta virtual desktop iji nweta ọzọ ohere na-arụ ọrụ na ihe dị gị mkpa.
Nweta enyemaka a onye digital nnyemaaka
Cortana enyere gafee gị Windows 10 ngwaọrụ, mwube ncheta, na-enyere dee ozi ịntanetị, ma ọ bụ mba chats na ndị enyi na ndị òtù ezinụlọ. (Cortana ahụmahụ nwere ike ịdị iche site na mpaghara na ngwaọrụ.)
Eme data nche
Windows 10 Pro na-enye izo ya ezo na BitLocker technology, na akpaka mmelite na Windows Update, iji nyere aka kpuchido nzuzo data. (BitLocker achọ Trusted Platform modul 1.2 ma ọ bụ 2.0, ma ọ bụ a USB flash mbanye.)
Conveniently nweta ngwa
Windows 10 Pro-ahapụ gị ike gị onwe gị na ngwa ngalaba na Windows Store ngwa ngwa nweta ngwa. (Number nke ngwa nwere ike gbajie ga adabere n'elu kacha nta mkpebi maka ngwa.)
Previous: Microsoft Win 10 Pro 64bit OEM Version na bekee FQC08929
Next: Microsoft Win 10 Pro 64bit OEM Version na French na Serial Key online ebighị
Tupu ị download Windows 10 Professional, gị na kọmputa ga-emezu na-esonụ chọrọ:
Processor: 1 gigahertz (GHz) ma ọ bụ ngwa ngwa.
Ram: 1 gigabyte (GB) (32-bit) ma ọ bụ 2 GB (64-bit)
Free ike disk ohere: 16 GB.
Graphics kaadị: Microsoft DirectX 9 ndịna ngwaọrụ WDDM ọkwọ ụgbọala.
Official Windows 10 professional Win Pro 10 USB...